Nagu saabsan - Higee Makiinado (Shanghai) Co., Ltd.
HIGEE MACHINERY wuxuu leeyahay in kabadan 15 sano oo khibrad xirfadeed ah.
HIGEE MACHINERY waxay ku hawlan tahay qaabeynta iyo soo saarida Khadadka Mashiinka Buuxinta iyo Calaamadeynta qeybaha kala duwan gaar ahaan biyaha, cabitaanka iyo warshadaha cabitaanka. Dabcan sidoo kale waxay bixiyaan mashiinno loogu talagalay cuntada, dawooyinka, qurxinta iyo warshadaha kiimikada.
Mashiinnadayada waxaa loo dhoofiyay in ka badan 100 waddan oo adduunka ah. Waxaan leenahay faa iidada aan kuheleyno xalka ugufiican si aan ulanoqno shuruudaha qaaska ah ee macaamiisha waxaanna diirada saareynaa tayada wanaagsan iyo adeega si loo dhiso loona ilaaliyo xiriirka ganacsi mudada dheer ee macaamiisha aduunka.
Waxaan ku helnay asal aad u wanaagsan la shaqeynta macaamiisha dalal kala duwan dhinacyo kala duwan sanooyin badan isla markaana bixinay adeeg dheeri ah. Waxaan aaminsanahay wadashaqeynteena aadka u wanaagsan inay natiijo wax ku ool ah u keeni doonto labadeenaba.
Waxaan maal gashanay oo wadaagnay 6 warshadood dalka Shiinaha. Inta badan macaamiisha soo dhawow si ay noola soo xiriiraan. Xaqiiqdii waxaan la dhisi doonnaa xiriir wanaagsan macaamiisha iyada oo loo marayo adeegyadeena wanaagsan iyo dabeecad xirfadeed.
Qalabkayaga ugu muhiimsan:
1.Monoblock Biyaha iyo Cabitaanka Buuxinta Calaamadaha Calaamadaha iyo xirxirida khadka oo dhameystiran
Khadadka Buuxinta Liineerka ee warshadaha kala duwan
3.Dhammaan noocyada mashiinka Calaamadaha
Mashiinka wax lagu duubo (dareeraha, budada, granule, koollada iwm)
Qalabka daaweynta 6Water
7.Beverage nidaamka daaweynta kahor